10 Kanye kwiiNdawo zoBomi | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 10 Kanye kwiiNdawo zoBomi
Uhambo loLoliwe, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Uhambo lukaloliwe lwaseJapan, Qeqesha uhambo eNorway, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSwitzerland, Ukuhamba eYurophu
Entlango, okanye ezantsi kweyona ndawo inkulu yekorale emhlabeni, phantsi kweZibane zaseMntla, ezi zezi 10 kanye-ebomini apho uya khona. ke, ukuba ujonge i-adventure engalibalekiyo eKenya, okanye naphi na phakathi kweMongolia neMoscow, emva koko kufuneka ujonge ezi ndawo.
1. Ugcino lweSizwe lwaseMaasai Mara, Khenya
Enye yeendawo zokugqibela zasendle kunye ne-epic kwihlabathi liphela, IMasai Mara National Reserve yindawo kanye ebomini. Ukungachukunyiswa yimpucuko, IMasai Mara yeyona ndawo ibalaseleyo yohambo. Ngaphezu, i Ugcino lwendalo likhaya kweyona mfuduko inkulu ehlabathini, ukushiya uphawu kumtyeleli ngamnye. ke, ukubona imfuduko enkulu; iikati zasendle, amaqwarhashe, kunye namanye amarhamncwa amaninzi kumgama nje weemitha ezimbalwa ukusuka kwindawo yawo yokuhlala ebalaseleyo ngamava aguqula ubomi..
ke, ukuba unqwenela ukuya kwi-adventure eguqula ubomi kwenye yezona ndawo zogcino lwendalo eziphefumlayo emhlabeni, ungakhetha phakathi kokuhamba phezulu esibhakabhakeni ngebhaluni yomoya oshushu okanye nge-4X4. kunjalo, kufuneka ucwangcise iholide yakho ye-safari phakathi kukaJulayi noSeptemba, ukuze ubone owona mhlambi umangalisayo wamarhamncwa alawula iindlela namazwe aseKenya, ngexesha lokufuduka.
2. Kanye kwiiNdawo zoBomi: Macchu Picchu
Ifihlwe kude kwiintaba zeAndes, Ilahliwe kodwa ingalityalwanga isixeko saseMachu Picchu. Iintsalela ezintle ze-Inca empire zime zomelele kwiinkulungwane zemozulu yasendle, ukulungele ukwabelana ngeemfihlakalo zobukumkani basePeru kumawaka eendwendwe ezifika yonke imihla, ngeenyawo, ibhasi, kunye nokuqeqesha.
Xa undwendwela iMachu Picchu, uya kumangaliswa bubukhulu kunye nendawo yesixeko sakudala. Indlela esi sixeko sikhulu esakhiwa ngayo saze salondolozwa kwindawo ephakathi ePeru, ihlala iyimfihlelo. kunjalo, eyona mfihlakalo inkulu sisizathu sokuba abahlali bayishiye iMachu Picchu. ke, wamkelekile kakhulu ukuba ujoyine ukhenketho oluninzi olukhokelwayo kwindawo kwaye uzame ukufumanisa. Ngaphezu, uya kuba nokukroba kwenye yezona nkcubeko zinomdla kunye neendawo zehlabathi. Ngaloo ndlela, qiniseka ukuba ubhukisha uhambo lwakho lokuya kanye ebomini ukuya eMachu Picchu ASAP 2022.
3. Trans-Mongolian Train ukusuka eMoscow ukuya eMongolia
Ezimbini zezona ndawo zimangalisayo kwihlabathi liphela yiSiberia neMongolia. Enkosi kwezothutho zikaloliwe zanamhlanje, namhlanje umntu unokuhamba kuzo zombini kuhambo olunye, ngololiwe waseTrans-Mongolian. Ukusuka eMoscow, ngeSt. Petersburg kunye neChibi iBaikal, Intlango yaseGobi, kwaye bafika eBeijing, i Trans-Mongolian luhambo emangalisayo.
Awuyi kuba neembono ezimangalisayo kuphela kwifestile yakho kuloliwe, kodwa uya kuba nethuba elinqabileyo lokuwela 6 imimandla yexesha. Ngelixa le yenye ye olona hambo lude lukaloliwe emhlabeni, iTrans-Mongolian uhambo lukaloliwe kufanelekile ukuthatha. ke, ukuba ujonge i-adventure eguqula ubomi, emva koko kufuneka uqalise ukucwangcisa uhambo lwakho ukuya kule ndawo yokuya kube kanye ebomini kwihlobo elizayo.
4. Kanye kwiiNdawo zoBomi: Tromso, Norowe
Ukudibana no-Aurora ngamava atshintsha ubomi kwaye eyona ndawo ilungileyo yale ntlanganiso ikwidolophu yaseTromso.. Kwintliziyo yommandla we-aurora, kwiNorwegian Arctic, unokubona ezona zibane zibukekayo kwipolar emhlabeni. Imijikelo, imitha, iikhethini, kunye nokukhanya kokukhanya kwendalo kukubonakalisa izibane zepolar, kubonakala kuphela kwiindawo eziphakamileyo, njengemimandla yeArctic kunye neAntarctic.
nje 5.5 iiyure ukusuka eLondon ngololiwe, le ndawo yokuya kube kanye ebomini ilula kakhulu ukufikelela kuyo. Indawo yayo ephakathi emangalisayo, pubs ezinkulu, kunye neendawo zokutyela zitsala abahambi abavela kwihlabathi liphela. Elona xesha lilungileyo lokufezekisa iphupha lakho libe yinyani nguDisemba ukuya kuMatshi ngezona mbono zibalaseleyo zeZibane zaseMantla eNorway.
5. Bali, Indoneshiya
Tropical, luhlaza, zizolile, I-Bali yiparadesi esemhlabeni kunye nenye ephezulu 5 kanye-ebomini apho uya khona. Ikhaya kwiitempile zakudala, Inkcubeko yaseBalinese, iyamangalisa iholide eco-friendly irente, kunye nendawo yokuhlala, ngemibono echukumisayo, I-Bali yindawo yokundwendwela engenakulibaleka.
Ngaloo ndlela, Abakhenkethi abaya e-Bali bafumana ezona mbono zomlingo kunye nomoya wehlabathi, singasathethi ke ngeembonakalo zomhlaba ezishiya umntu engathethi kwaye ekhwankqisiwe phambi kwendalo ezukileyo. Ukwengeza, iintlambo eziluhlaza, kunye neengxangxasi nezisemaphandleni, yenza umfanekiso ofana nekhadi leposi kunye nendawo apho bonke bafuna ukuya khona, ubuncinci kube kanye ebomini.
6. Kanye kwiiNdawo zoBomi: Ingxondorha enkulu yoMda, Ostreliya
Ukuzolula ngaphezulu 900 iziqithi nangaphezulu 2000 km, Umqobo omkhulu wolwandle eOstreliya yindawo ephuphayo kuyo nayiphi na idiver kunye nomthandi we-snorkeling. I-coral reef emangalisayo iseQueensland, apho ungabona khona 1500 iintlobo zeentlanzi, izilwanyana ezimangalisayo, kunye neekorale ezintle.
IGreater Barrier Reef yindawo emangalisayo engaphantsi kolwandle. ke, ukuba unethamsanqa, usenokubona izidalwa zangaphambili zidada kanye ecaleni kwakho. ngoko ke, apakishe iibhegi zakho, i-snorkeling okanye i-scuba diving gear, kuba uhambo kanye-a-ubomi ubomi ukuya Great Barrier Reef e Australia.
7. eKapadokiya, ikarikuni
Ukukhwela ibhaluni yomoya oshushu phezu kweKapadokiya eTurkey luhambo oluvuthuza ingqondo. Ngaphezu, ngelixa usemoyeni, uya kubona ezinye iibhaloni zomoya oshushu ezimibalabala kunye nentaba-mlilo yeKapadokiya. kunjalo, ukuba uyoyika iindawo eziphakamileyo, emva koko ujonge iibhaluni zomoya oshushu ukusuka kwigumbi lakho lehotele okanye kwikhefi yangaphandle, iya kuba ngamava angenakulibaleka.
Ukongeza kwi-adrenaline engxamisekileyo yokuba semafini, uya kububona ubungangamsha belizwe elikhethekileyo laseKapadokiya. Njengokuba, intlambo yeeMonki izele ngamatye amile okwetshimini amisa kulo lonke ilizwe. Ngaphezu, amakhaya eBronze Age kunye neecawe ezikrolwe ezintabeni, ziindawo ezimangalisayo zokutyelela eKapadokiya. Ukuyishwankathela, IKapadokiya likhaya leendawo ongayi kuzibona kwenye indawo emhlabeni.
8. Kanye kwiiNdawo zoBomi: I Swiss Alps
I Swiss Alps yindawo ongenakulibaleka nangaliphi na ixesha lonyaka, kodwa ebusika zintle ngokukhethekileyo. Ngelixa entwasahlobo nasehlotyeni unokonwabela ukuhamba kunye nemidlalo yangaphandle, ebusika kufuneka uzame i-snowshoeing. Ewe, I-snowshoeing ngumdlalo okhethekileyo wasebusika, kunye nezihlangu ezifanelekileyo, ungajonga ngakumbi i-Alpine landscape.
Umdlalo okhethekileyo wasebusika waqala ngeenxa zonke 6,000 kwiminyaka eyadlulayo kwaye sele idume kakhulu kwiiAlps zaseSwitzerland ezinekhephu. Ukusuka eChamonix naseMont Blanc ukuya eEcrins Ipaki yelizwe, ungakonwabela ezona mbono zintle zentaba ngelixa uhamba ngekhephu. Ukuba azihlanganisele izinto ukuya, IiAlps zaseSwitzerland zaziwa njengendawo enoluhlu lweebhakethi, kodwa i-snowshoeing iyenze enye yazo 10 kanye-ebomini apho uya khona.
9. Patagonia, Ajentina
Umkhenkce, iincopho zeentaba ezintle, amahlathi, amachibi acocekileyo, IPatagonia eArgentina yiparadesi yokukhwela intaba. Ngaphezu, egcwele iindlela kunye nemibono emangalisayo, Ipaki yesizwe yomkhenkce yasePatagonia yindawo ekufikelwa kuyo kanye ebomini eMntla Melika..
Ukwengeza kwi iindlela zakudala zokuhamba, Abakhenkethi abanomdla kakhulu banokunyuka umkhenkce waseRio Negro, umzekelo. Ngamanye amazwi, ungazifumana ukhwela kwindawo enomkhenkce, intaba enekhephu ye-adrenaline kunye namava awodwa. Le yenye yezinto ezingaqhelekanga onokuthi uzenze kwiPatagonia emangalisayo.
10. Kanye kwiiNdawo zoBomi: Japhan
Ngaxa lithile phakathi kuMatshi noAprili iJapan idubula iintyatyambo ezintle ezipinki kunye neentyatyambo zecherry ezimhlophe. Iintyatyambo zeSakura zinemibala eKyoto, eTokyo, kunye nezinye izixeko kwindawo yomlingo kunye nolonwabo. Kuyathakazelisa ngokungathandabuzekiyo, ngexesha leentyatyambo zeSakura, IJapan yozela, Ukuzola okukhethekileyo kugubungela ubomi obunesantya esiphezulu eJapan. Lo moya ungaqhelekanga utsala izigidi zeendwendwe eziya eJapan kwiholide yasentwasahlobo.
Ngaloo ndlela, ukuba ukhe wafumana ithuba lokuhamba kude ngexesha lomlingo, ke intwasahlobo eJapan lixesha elifanelekileyo lokutyelela. Ukongeza kokuzama ukutya kwasekuhlaleni, ukutyelela iitempile zegolide, kunye nezakhiwo ezimangalisayo zaseTokyo, ukuba nepikiniki phantsi kwemithi ye-Sakura yinto eyenzeka kanye ebomini.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi 10 Kanye kwiNdawo zoBomi kwihlabathi liphela.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog "i-10 Kanye kwiNdawo zoBomi" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/xh/once-lifetime-destinations/	iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/xh/once-lifetime-destinations/	iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/xh/once-lifetime-destinations/	iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/xh/once-lifetime-destinations/	iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/xh/once-lifetime-destinations/
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha uhambo eNorway, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSweden, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
ESpeyin Ngololiwe: Indlela To Thenga Amatikiti And More
Uhambo loLoliwe, Uloliwe eSpain, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu